बलिउड स्टार रणविर र वरुणलाई टक्कर दिँदै आयो यी नायकलाइ एकैपटक १२ फिल्मको अफर! – Medianp
बलिउड स्टार रणविर र वरुणलाई टक्कर दिँदै आयो यी नायकलाइ एकैपटक १२ फिल्मको अफर!
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २६, २०७५१३:००0
एजेन्सी,२६ पुस । पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रबाट छायाँमा परेका बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूत फेरि चर्चामा आएका छन् । फिल्म ‘केदारनाथ’ रिलिज भएसँगै सुटिङमा ब्यस्त रहेका सुशान्तलाई एकैपटक थुप्रै फिल्महरुमा अफर आएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘केदारनाथ’ फिल्म रिलिज भएपनि सँगै सुटिङ गरिएको फिल्म ‘सोनचिडिया’ रिलिज हुन बाँकी रहेको छ । सैफ अली खनकी छोरी सारा अलि खान पनि सुशान्तसँगै चर्चामा रहेकी छन् । केदानरनाथले राम्रो चर्चा पाएको कारण यी दुवैको भविष्य उक्सिएको छ । यतिबेला सुशान्तलाई १२ वटा छुट्टा छुट्टै फिल्म निर्माताहरुले अफर गरेको छन् । उनी भन्छन् कुनको सुटिङ छिट्टै सुरु हुन्छ ।
यसरी एक्कासी यतिधेरै फिल्मबाट अफर आउन सुरु भएपनि उनी आफ्नो फिल्मी पारिश्रमिक समेत बढाउने तयारीमा रहेका छन् । उनलाई अफर आएक फिल्महरु गर्दिन् भन्न सक्ने कुनै पनि नरहेको बताएका छन् । बलिउडमा छुट्टै पहिचान बनाएका सुशान्तले फिल्म ‘ड्राइभ’ को पनि घोषण गरिसकेका छन् ।
उनीसँग ज्याकलिन फर्नान्डिज देखिने भएकी छन् । यसरी तिब्र रुपमा सुशान्तको फिल्मको चर्चा बढी रहँदा उनको फ्यान फलोअर्स पनि बढेका छन् । यो फिल्म बाहेक उनको फिल्म ‘सोनचिडिया’ को ट्रेलर पनि रिलिन भएको छ । उक्त फिल्ममा उनीसँग भूमि पेडनेकर रहेकी छन् । चाँडै सुशान्त र श्रद्धा कपू्रको फिल्म ‘छिछोरे’ मा पनि देखिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवसँग सल्लाह लिँदै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट, को को छन् रिसाउनेमा ?
आफूलाई सोध्दै नसोधी डीएनएका लागि रगत दिएको भन्दै निर्मलाकी आमामाथि हातपात
यती महंगो सेटमा खिचिएको थियो कलंक टिजर, माधुरीदेखी आलीयासम्म एउटै फ्रेममा
फोटो खिच्न आएका पत्रकारलाई सात वर्ष पनि नपुगेकी ऐश्वर्या पुत्री आराध्याले यसरी थर्काइन् (भिडीयो)
मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा भयो बिष्णु माझिको चर्चा, कुलेंद्र बिकले खोले भित्रि कुरा (भिडियो सहित)